Fanetribe ho an’ny Firenena ny fisian’ireo tsy matimanota. « Tsy azo ekena intsony izany », hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian. 24 juin 2020
Tanteraka omaly tetsy amin’ny lapan’ny Antenimierandoholona Anosy ny fihaonana mivantana teo amin’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ireo Loholon’i Madagasikara. Fotoana izay didian’ny lalàna fa hanaovana tatitra amin’ireo asa vitan’ny fahefana mpanatanteraka. Teboka miisa efatra no nifotoran’ ny tatitra nataon’ ny Praiminisitra tamin’izany. Noresahiny ny mikasika ny lafiny fitantanana. Isan’ny nisongadina tamin’ izany ny ady amin’ ny tsy matimanota sy ny fametrahana ny mangarahara ary ny fanomezan-danja ny Faritra.
Raha tsiahivina dia tamin’ny talata 2 jona lasa teo no efa nandalo tsirairay teo anatrehan’ireo Loholona ireo mpikambana ao amin’ ny Governemanta. Omaly no nitondra fanazavana misimisy ary niezaka nandravona an’ireo dingam-pampandrosoana efa vita ny Praiminisitra sy namariparitra ny fandaharan’asa hotanterahina amin’ ity taona 2020 ity.